1 2 3 4 5 6 7 ... 4481 Yehla
Amalungu we-0 nabavakashi be-14 babuka isihloko.
« Phendula #33: NgoFebhuwari 11, 2008, 05:52:49 pm »
Sithandwa kakhulu okubalulekile Ngibhale inkondlo ethi ADMINIMZE.
Nami ngifuna ukubhala lapha.
Intamo yami mncane kunezinwele ...
Ngenze amaphutha amaningi.
Amacala amaningi angenacala
Ngilimaze izinhliziyo eziningi.
Unembeza wami wahlulela, ngaphandle kwanoma yini enye
Ngiyeke iningi labo.
Ngalesi sikhathi isinqumo siyindaba yothando,
Isijeziso sinzima kakhulu, yicala lakho leli.
ngoba germanxi Ngathanda...
Ngimba imigudu enhliziyweni yami
Ngamazinyo nezipikili zami,
Inhliziyo yami igcwele izimbobo.
Ngishiye izikhathi ezingamakhulu.
Ekuphumeni kwawo wonke umhubhe almancax ,
Angikwazi ukugijimela phambili noma emuva.
Ngiyaqonda, ayikho insindiso ngalesi sikhathi.
Vele, impilo izofushane.
Uzophula ipeni ku-'Kwenziwa ', (jentzsch derki)
Futhi mina,almancaxin enhliziyweni
Ngizothola impilo ngenkathi ngifa.
Awusoze wabulala sthandwa sami
Ngizophila kuze kube phakade ...
Intamo yami mncane kunezinwele! Kwesokudla,
I-Almanxac vutha ngenxa yakho.
« Phendula #34: NgoFebhuwari 11, 2008, 06:10:38 pm »
Futhi manje, dadewethu u-esma, kufanele ngivume ukuthi ngiyakuthanda ngempela ... Akukho lutho isandla sakho, ingalo, imibono yakho engafiki kukho, akukho okunganele ... Awu, bravo ... Uyithalente elixakile ... Halal, ngingathini ....
« Phendula #35: NgoFebhuwari 11, 2008, 06:15:18 pm »
Kucashunwe ku: esma 41 - Februwari 11, 2008 ngo-05: 46: 43 pm
Icashunwe ku: gütig - Februwari 11, 2008 ngo-11: 11: 41 am
Noma ulungile ngesihloko esinjalo, ngeke uthukuthele ngokuchazwa komdwebo kawoyela. Ngalesi sizathu, singacabanga ngalo njengebhokisi lodoti lesithangami ... Noma njenge-attic lapho kushiye khona izinto ezingadingekile.
Udoti Box haaa ....
Kulungile makube njalo.
Angisho lutho manje, ngizokukhombisa ngemuva kwezinyanga eziyi-8.
Empeleni, uqinisile, lokhu kungenzeka kube "kudoti" weSithangami.
Kungani kungenjalo !!
Inzondo, inzondo ekuwe ungakwazi "ukuphonsa phezulu" lapha.
Ungashiya izinto zakho ezingadingekile lapha (umakhalekhukhwini, Imali, izikhwama njll).
Le yindawo ephephe kakhulu, ungakhathazeki.
Ngicela ungaphatheki kabi, angikwazi ukuma ... ... bengingenanhloso embi. ...
« Phendula #36: NgoFebhuwari 11, 2008, 06:16:52 pm »
Kucashunwe ku: esma 41 - Februwari 11, 2008 ngo-05: 52: 49 pm
Inkondlo uzoyibeka emehlweni ethu
Woza, ngiyakuxolela, angikwazi ukukuvimba
« Phendula #37: NgoFebhuwari 11, 2008, 06:22:49 pm »
Kucashunwe ku: gütig - Februwari 11, 2008, 06:10:38 pm
Ngiyavuma impela. Ngiyabonga, gutig!
Uma ukwenza ngenkuthalo nesifiso, awusoze ukhathele futhi ukhathele.
« Phendula #38: NgoFebhuwari 11, 2008, 06:32:56 pm »
Bangani, ngicela ukubuza okuthile ... ungabhala amagama amantombazane nabafana abahle owaziyo lapha kimi. Mhlawumbe uzosho kusenesikhathi, kepha izinsuku zihamba ngokushesha. Sengivele ngicabanga ngabo. Vele, nginike injabulo manje
« Phendula #39: NgoFebhuwari 11, 2008, 06:50:22 pm »
nisa noma azra uma intombazane
Uma kungowesilisa, ihlengethwa liyi-emre noma i-aegean
Vele, into ebaluleke kakhulu ukuthi ube nempilo ...
Jabulela lezi zinjabulo ezinhle njengoba ufisa, othandekayo ...
Kuhle nokuhlanganyela nathi
amagama ami maningi ....
« Phendula #40: NgoFebhuwari 11, 2008, 06:53:46 pm »
Ngiyabonga iSinem ngokwabelana ... Ngizocabanga ngakho konke okubhalwe lapha ngakunye ... Uma kuza engqondweni, kuzobuye kube ihlobo futhi Ngiyabonga kusengaphambili ...
« Phendula #41: NgoFebhuwari 11, 2008, 07:05:08 pm »
Uma kunesinkwa, ngicabanga ukuthi uma ithemba kuyintombazane, sude.
« Phendula #42: NgoFebhuwari 11, 2008, 07:11:00 pm »
umngani wami u-Ahsen Berra wayebeke igama lendodakazi yakhe futhi wacabanga kakhulu ngegama elithi Nihle ..
Bafuna amagama izinyanga eziyi-9 kepha abakwazanga ukuwabiza ngamaviki ama-2 lapho ingane izalwa.
Ngiyethemba unquma kalula ubelethe ingane enempilo
usawoti wolwandle, umzila wemvula lapho uthinta uvemvane ...
imikhondo yamagama angashiwongo njalo lapho eyedwa ....
« Phendula #43: NgoFebhuwari 11, 2008, 07:27:14 pm »
Icashunwe ku: a_ysche - Februwari 11, 2008 ngo-05: 51: 57 pm
ooo wamukelekile esma41 ..
cha cha esma41 Isibopho
Uma nje ubuzwa ngokuphepha kwale ndawo, nginesiqiniseko sokuthi singazikhohlwa thina, hhayi lapha, sishiya izinto.
Cha, ngicela ungazikhohlwa.
Izinto zakho zanele ...
1 2 3 4 5 6 7 ... 4481 Iya phezulu